Imidlalo yokudlala yeNubia Red Devils eSport izakufika ngoNovemba 6 | I-Androidsis
IXiaomi Black Shark Helo ayiphumeleli kukhuphiswano: iNubia Red Devils eSport izakufika ngoNovemba 6
Inkxaso-mali yeZTE ilungiselela i-terminal entsha, eya kuzama ukumelana ne Xiaomi Shark omnyama uHelo, ekwabizwa ngokuba yiBlack Shark 2, kwaye iya kuphumelela Umlingo obomvu. Esi sixhobo izakubizwa ngokuba yiNubia Red Devils eSport Kwaye siza kuphehlelelwa eJingdong, isihlwele saseTshayina, ngoNovemba 6.
Esi sigxina senzelwe abadlali, abo basebenzisi banikezela ixesha labo elininzi kwimidlalo, ke iya kuhlala ngokucacileyo imisebenzi emininzi kunye neempawu eziza kuyenza ilungele oko. Yintoni esinokuyilindela?
Umnxeba uyaqwalaselwa yifowuni yomdlalo opheleleyo, sigcina engqondweni iinkcukacha ezikwiipowusta esizibonisayo apha ngezantsi. Isixhobo siza nezitshixo zokudlala ngokwasemzimbeni kunye netekhnoloji yesakhelo sokuchukumisa esenza ukuba kusebenze iminwe emi-4. Kuza nenjini emgceni eyenza ukothuka kwe-4D. Ezinye izinto ezilindelweyo zibandakanya ijelo le-DTS 7.1 kunye ne-3D ejikeleze istereo bounce.
Ngokwekhompyutha, iiRed Devils eSports ziya kuxhotyiswa yi-Snapdragon 845 kwaye ziya kuncedwa ukuya kuthi ga kwi-10GB ye-RAM, Esilingana neso senziwa nguShark Helo omnyama kunye Mi 3 Mix. Iya kuxhobisa ngomthamo wokugcina ngaphakathi ukuya kuthi ga kwi-256 GB. Ukongeza, enye yeepowusta ikwacacisa ukuba ukusebenza okuphezulu kweselfowuni kuza nomoya ombini kunye nenkqubo yokupholisa ulwelo.
Ngakolunye uhlangothi, Isakhelo seselfowuni siyilelwe ngezinto zokudlala ezinamacala amabini, Oko kuthetha ukuba asizukufuna naziphi na iiplagi zendlela ukuba sibe nemvakalelo yokuba nephedi yomdlalo. Ngokukodwa, i-Nubia Red Devils eSport iza kufakwa kwangaphambili ngendawo yokudlala ye-GameBox ukuqinisekisa amava okudlala apheleleyo. Eminye, kufuneka nje sibe nomonde kwaye siyilinde ukuba yenziwe ngokusemthethweni ngo-Novemba 6 ukuze sazi zonke iimpawu zayo, iinkcukacha zobugcisa, ixabiso kunye nokufumaneka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IXiaomi Black Shark Helo ayiphumeleli kukhuphiswano: iNubia Red Devils eSport izakufika ngoNovemba 6
Yintoni ekufuneka uyijongile ukuba ifowuni yakho ye-Android ayivuli?
I-ZTE ingena kwakhona eUnited States, ngeli xesha, kunye neBlade Max View kunye neBlade Max 2s